Nama biqiltuu Odaa kuma 30 kunuunsan: Zinaabuu Taakkale - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright Feesbuukii Zinaabuu Taakkale
Qooda Odaan Oromoo biratti qabu irraa ka'uudhaan biqiltuu Odaa kunuunsuurratti hojjechaa akka jiran kan dubbatan Obbo Zinaabuu Taakkalee waan hojjetaa jiran guutuu nuuf qoodaniiru.
Yaadi kun akkamiin dhufeef?
Obbo Zinaabuu Taakkale magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Eekkaa iddoo Faransaayi jedhamu jiraatu.
ALI bara 1991 irraa eegalanii magaalaa Finfinnee keessa kan jiraataa jiran Obbo Zinaabuun waggoota 14'f Daandii Qilleensaa Itoophiyaa keessa akka hojjetan dubbatu.
Waa'ee Odaafi kabaja inni Oromoo biratti qabu erga miidiyaarraa dhagahanii booda Odaa kunuunsuuf jedhanii hojiisaanii akka dhaaban dubbatu.
''ALI bara 2008 miidiyaan OBS osoo waa'ee Odaan Hooda ta'uusaa dubbatuu dhagayeen yaada kiyya na hawwate. Odaan muka nagaa, araaraa, mallattoo dimokiraasii ta'uusaa ergan hubadhee booda muki akkasii kun babal'achuu qaba jedheen murteesse.''
Jalqaba mana waliin jireenyaa ykn kondomiiniyamii keessa jiraatan gamoo afraffaarratti firii odaa dhaabanii kunuunsuu kan dubbatan Obbo Zinaabuun achitti erga milkaa'anii booda ooyiruutti ba'anii babal'isuu akka eegalan dubbatu.
''Achirraa ka'een waa'ee odaa qorachuu jalqabe. Odaan uummata Oromoo bira darbee akka addunyaattillee akka beekamuufi iddoo guddaa akka qabun hubadhe.
Warri Keeniyaa Odaadhaan mootii mukaa(king of trees) akka jedhan, warri Ijipti muka jireenyaa(tree of life) akkasaan jedhan, uummata Oromoof ammoo mallattooma jireenyasaa akka ta'e hubadheen hojjechuu eegale. Daandii Qilleensaa keessa osoon jiruu Sanbataa fi Dilbata yeroo koo kunuunsa Odaa irrattin dabarsaa ture.'' jedhan.
Odaa kallachaa maaliif filatan?
Sanyii Odaa argachuuf odaawwan Oromoo jiran hundarra deemeera kan jedhan Obbo Zinaabuun akkaataa amala Odaatiin dhumarratti Odaa Kallachaa kan Godina Kibba Lixa Shawaa Aanaa Sadeen Sooddoo naannoo magaalaa Tulluu Boollootti argamu irraa sanyii fudhachuuf akka murteessan dubbatu.
''Odaa Bisil, Bulluq, Bultum, Roobaa, Nabee, hundumaa ilaaleera. Amala odaa guutummaa guutuutti kanan irratti arge garuu Odaa Roobaafi Odaa Kallachaa kan naannoo magaalaa Tulluu Boollootti argamuudha. Odaan Roobaa waan narraa fagaatuuf jedheen kan Odaa Kallachaa kanarraa sanyii walitti qabe.''
Odaan kan ittiin beekamu keessaa hiddaa fi damee hedduu qabaachuu, mukni biraan irratti biqilee kan hin dhaallee fi bineensi nama miidhu kan itti hin galle ta'uusaati jedhu Obbo Zinaabuun.
Amaloota kanneen Odaa Kallachaarratti ergan argee mirkaneeffadheen firii irraa guuree dhaabee kunuusuu eegale jedhan.
Sanyiin Odaa akkamiin argatan?
Amalli walhormaata Odaa iccitiidhaan akka ta'etu himama, odaan guyyaa hin daraaru,iccitiidhaan walhora jedhama.
Kanaafuu akkamiin firii odaa argattan jennee isa gaafanneef, ''Odaan hin daraaru. Kan nama ajaayibu garuu Odaan bonaafi ganna firii qaba. Bonaa fi ganna lalisa. Firiin isaallee ni nyaatama.
Daraaruu baatus duudaa ta'ee keessa isaatti sanyii horata. Mixiitu keessa seentee walquunnamsiifti kormaafi dhalaa isaa.
Isa booda anis kitaabilee mukeen akka harbuu, qilxuufi Odaa akkamiin oomishuun akka danda'amu ibsan dubbisuun eegale. Haala kanaanin kan Odaa irratti xiyyeeffadhee sanyii filadhee kunuunsa eegale.''
ALI Onkoloolessa bara 2009 manuma jalatti firiin an cuuree goske biqile jedhu Obbo Zinaabuun.
''Biqiluusaa wayitan arge baayyeen gammade. Isaa booda mootummaa naannoo Oromiyaa deggersa gaafanne.
Mootummaanis naannoo Sabbataatii lafa nuuf kennee irratti kunuunsaa nuun jedhe. Golgaa ykn Green house hojjennee kunuunsuu eegalle. Haala kanaan baay'isnee oomishuu eegalle.''
Yeroo ammaa buufata Sabbataa fi Oolankomiitti biqiltuu kuma 30 kunuunsineerra.
Qormaati isaan mudate maali?
Odaan Hooda jedhamee uummata Oromoo biratti bakki guddaan kennamuuf akkamiin dhaabamee biqila falmiin jedhu namoota baay'ee irraa nu mudate jedhu Obbo Zinaabuun.
''Akkamitti Odaan biqiluu danda'a kan jedhu gaaffii guddaa ture.
Kana uummata amansiisuun qormaata ture. Hooda ta'uu isaarraan kan ka'e sirumaa Odaan ni biqilaayyuu jechuun uummatarraa gaaffiin ka'aa ture. Nutimmoo Odaan yeroosaatu geenyaan biqile jenna.
Odaan amma biqilee kunuunfameera. Uummataafis raabsaa jirra.''
Odaan akkaataa uumamaatiin biqilee , biqiltuusaa kunuunsaa akka jirru uummata amansiisuuf magaalota Oromiyaa Finfinneerraa fageenya kiilomeetira 100 irratti argaman irra deemnee amansiisuuf yaalleerra jedhu Obbo Zinaabuun.
'Beekumsaafi muuxannoo rakkoo furan biyya galchuu feena'-Barattoota Oromoo Tarkii
Bara 2010 irraa eegalee uumanni akka fudhatee dhaabuuf hojiin hubannoo uumuu nuti hojjetaa turre baayyee fudhatama hin arganne kan jedhan Obbo Zinaabuun bara kana garuu erga xiyyeeffannoon mootummaa biqiloota dhaabuu fi kunuunsuu ta'ee as keenyas keessa xiyyeeffannoo argateera jedhan.
''Biqiltuun Odaa utuu hin dhaabamin waggaa lama guutanii nu jalaa baduuf turan. Kun biqiltuu Odaati jenneema uummata amansiisuutu qormaata ture.
Kaan kun biqiltuu harbuuti jedha, kaanimmoo qilxuudha jedha, rakkoo guddaatu ture. Amma kunoo abdii horanneerra. Birrii shantamaan biqiltuu tokko gurguraa jirra. Keessas seenaa Oromoof gumaachuu waan ta'eef jenneetuma gatii gadi buusne.''
Akka naannoo Oromiyaatti waggaa waggaadhaan biqiltuu dhaabuun hojii xiyyeeffannaa qabu ture, garuu dhugaadhaan waan lafarratti mul'atu miti jedhan Obbo Zinaabuun.
Bara kanammoo xiyyeeffannoo addaatiin mootummaan Ministira Muummee Dr.Abiy Ahmadiin durfamu dhaabbii biqiltuu labsanii waan jiraniif abdii qabna jedhan.
''Mootummaanis akka nu gargaaru itti iyyanneerra. Abdii qabna. Biqiltuun kun qabeenya dhuunfaa osoo hin taane kan Uummata Oromoo hundaati. Biqiltuuwwan biroo caalaa xiyyeeffannoo argachuu qaba.
Kanaafuu mootummaan karoora biqiltuu miiliyoona 200 guyyaa tokkotti dhaabuuf qabate kana keessatti keenyarrattis xiyyeeffachuu qaba.'' jedha Zinaabuun.
Guyyaa kaleessaa gareen Miidiyaa OMN biqiltuu Odaa 700 irraa fudhachuun iddoo lammiileen Oromoo Irreecharratti itti dhuman irra dhaabuu kan dubbatan Obbo Zinaabuun namoonni biroonillee akkasumas biqiltuu Odaa kana fudhatanii dhaabuun seenaaf kaa'uu qabu jedhan.